Kucheka Fekitori - China Kucheka Vagadziri uye Vatengesi
Sangana nezvido zvako zvekuchinja nekukurumidza kubva pakucheka kuenda kukuya
Mafomu: kushandiswa pamagetsi denderedzwa saha, machena muchina uye angle grinder.
Giredhi remhando: nyanzvi
Multifunctional Vakaona Nereza:Dual chinangwa dhizaini, kucheka uye sanding, zvakasiyana-siyana uye nyore kushandisa. Munguva yekuvaka, vashandi vanogona kugadzirisa kushandiswa kwekucheka nekukuya chisvo zvichienderana nekufambira mberi kweprojekiti. Yakanaka mhando dombo rekucheka reza, rakapinza uye rinogara kwenguva refu, rinoponesa nguva nekuedza.
Multi Dura / Kukuya 2 muna 1 Dhaimondi Disc
Kushanda: denderedzwa masaha, angle grinders, kucheka michina, isina guruva saha
1. Yakagadzikana cutter musoro, hapana kurasikirwa kwemeno.
2. Wide akasiyana mamiriro ekushandisa, yakanaka yakaoma yekucheka maitiro.
3. Kupisa kwekumanikidza, nyore kutema, chengetedza nguva uye kushanda nesimba.
4. Dhizaini yemazino ekuchengetedza pamucheto inoita kuti jeko resaha riwedzere kugona kurodza.
1. Yakatetepa zvakakwana, yakasimba simba: hwaro hunosarudzwa kubva pakakwirira simba chiwanikwa simbi simbi, mushure mana maitiro ekurapa, kukwirira kuomarara uye kuomarara kwakanaka.
2. Smooth kucheka kunzwa: iko kushandiswa kwesimbi poda, idenderedzwa yekumhara granulation maitiro, neakakwira kumanikidza sintering yekucheka kunzwa, inotsvedza uye inoshanda.
3. Kupisa kupisa dhizaini; kutsanya kupisa kupisa, kudzora kukanganisa kumuchina, kuwedzera hupenyu hwebasa.
Kucheka kwe: yakashandiswa zvakanyanya kukurumidza kucheka kwezvinhu zvakasiyana, senge machena, girenayiti, kongiri, nezvimwewo, nehupenyu hwakareba hwebasa.zvigadzirwa zvemagetsi, countertop, washbasin, zvivezwa, machira ekicheni, mataira epasi, kune akasiyana akacheka anodikanwa, ndapota sarudza inoenderana akaona blade.
Cheka & Kukuya Diamond Disc
Nyanzvi: inogona kukurumidza kukurumidza kumhanyisa uye kuyera lifespa
Pashure: Chikamu Turbo Diamond Nereza
Zvadaro: Diamond Wall Chaser Nereza
Kuenderera Rim Diamond Vakaona Nereza
Diamond Kucheka Nereza
Diamond Akaona Nereza
Yakaomeswa-yekucheka Chikamu Dhayamondi Yakaona Nereza
Chidimbu Diamond Akaona Nereza
Tornado Turbo Daimondi Yakaona Nereza
Turbo Diamond Akaona Nereza
Wet-achicheka chidimbu Diamond Vakaona Nereza